Inguqulo entsha ye-IPFS 0.6 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
Muva nje ukukhishwa kwenguqulo entsha kumenyezelwe uhlelo lwefayela olusabalalisiwe IPFS 0.6 (Uhlelo lwefayela le-InterPlanetary), eyakha isitolo sefayili esenziwe inguqulo yomhlaba wonke kufakwe ngendlela yenethiwekhi ye-P2P eyenziwe ngezinhlelo zamalungu. IPFS ihlanganisa imibono esetshenziswe ngaphambilini ezinhlelweni ezinjengeGit, BitTorrent, Kademlia, SFS neWebhu futhi ifana ne "pair" eyodwa yeBitTorrent (ngababili ababamba iqhaza ekusatshalalisweni) beshintshana ngezinto zeGit.
I-IPFS yehlukile ekubhekaneni ngokuqukethwe kunendawo nendawo namagama aphikisayo. Ikhodi yokuqalisa yokusebenza ibhalwe ku-Go futhi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-Apache 2.0 kanye neMIT.
Ku-IPFS, isixhumanisi sokufinyelela ifayela sihlobene ngqo nokuqukethwe kwaso futhi kufaka phakathi i-hash yokubhala ngokuqukethwe. Ikheli lefayela alikwazi ukuqanjwa kabusha ngokungemthetho, lingashintshwa kuphela ngemuva kokushintsha okuqukethwe.
Ngokufanayo, akunakwenzeka ukwenza ushintsho kufayela ngaphandle kokushintsha ikheli (inguqulo yakudala izohlala kukheli elidala, futhi entsha izotholakala ngekheli elihlukile, ngoba i-hash yokuqukethwe kwefayela izoshintsha).
Njengoba isikhombi sefayela siguquka ngoshintsho ngalunye, ukuze singathumeli izixhumanisi ezintsha isikhathi ngasinye, izinsizakalo zinikezwa ukuxhumanisa amakheli angunaphakade acabangela izinhlobo ezahlukahlukene zefayela (IPNS), noma ukulungisa i-alias efana ne-FS yendabuko ne-DNS I-MFS (Isistimu Yefayela Eguqukayo) ne-DNSLink).
I-IPFS isiza ukuxazulula izinkinga izindaba njengokuthembeka kwesitoreji (uma isitoreji sokuqala singasebenzi, ifayela lingalandwa kusuka kwezinye izinhlelo zabasebenzisi), ukuphikisana nokuvinjelwa kokuqukethwe (ukuvimba kuzodinga ukuvimba zonke izinhlelo zabasebenzisi ezinekhophi yedatha) nokuhlela ukufinyelela lapho kungekho ukuxhumana okuqondile kwe-Intanethi noma lapho ikhwalithi yesiteshi sokuxhumana ibuthaka (ungalanda idatha ngokusebenzisa kakhulu eduze kwenethiwekhi yendawo).
1 Yini okusha ku-IPFS 0.6?
Yini okusha ku-IPFS 0.6?
Uhlobo olusha luphawulekile kufayela le- ukufakwa kokuhamba okuzenzakalelayo okususelwa kuphrothokholi ye-QUIC, okuyi-plug-in kuphrothokholi ye-UDP esekela ukuphindaphindwa kokuxhuma okuningi futhi inikeze izindlela zokubethela ezilingana ne-TLS / SSL.
Ku-IPFS, isokhethi lokuthola ukuxhumana kwe-UDP liqala ngokuzenzakalela kukheli elifanayo lenethiwekhi nasethekwini njenge-TCP-based transport driver. I-QUIC isetshenziselwa ukuxhumana okungenayo nokuphumayo, futhi lapho uxhuma kuma-node amasha, uma i-QUIC ingatholakali, izobuyela ku-TCP.
Ukuqamba kwesibili kwakubalulekile ama-sUMSINDO ukwesekwa kwezokuthutha okuphephile, ngokuya nge-Noise protocol futhi yathuthukiswa njengengxenye ye-libp2p, i-modular network stack yezinhlelo zokusebenza ze-P2P.
Ngemuva kokuhlanganiswa kokuqala kokuxhumeka, konke ukushintshaniswa kwedatha okulandelayo phakathi kwabahlanganyeli kubethelwe futhi kuvikelwe ekulahlekelweni kwe-evesdropping. UMSINDO ungene esikhundleni sokuthuthwa kwe-SECIO, kepha i-TLS 1.3 iyaqhubeka nokusetshenziswa njengendlela eyinhloko yokubethela ukuxhumana phakathi kwezindawo.
UMSINDO ulula kakhulu ukuwusebenzisa futhi umiswe njengezokuthutha eziwela endaweni yonke ezingasetshenziswa ngezilimi ezahlukahlukene zokuhlela.
Uhlobo olusha futhi inikeza ithuba lokwengeza amakhasi akho "angama-404 angatholakali" bese wengeza ukusekelwa okungakhethwa kwendlela yokufaka ikhodi ye-Base36, elungele idatha engacabangi ye-alphanumeric efana namagama wesizinda (uma usebenzisa i-Base32, izinkinobho ze-Ed25519 IPNS zingamabhayithi amabili amakhulu kunomkhawulo wosayizi wesizinda esingezansi, futhi nge-Base36 ilingana nomkhawulo).
Futhi, inketho 'yokubhanqa' ingezwe kuzilungiselelo, echaza uhlu lwama-node ukuxhuma, ukugcina ukuxhumana, nokuxhuma kabusha ukunquma ukuxhumana "okunzima" phakathi kontanga abasetshenziswa njalo.
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi okwengeziwe ngale nguqulo entsha, ungabheka imininingwane, ngokuya kusixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo olusha lwe-IPFS 0.6 selukhishiwe futhi lezi yizindaba zalo
Lokhu yinto engike ngayibona phambilini, kepha angiqondi ukuthi kungaba yini ukusetshenziswa. Ngicabanga ukuthi kukhona izinsiza noma izinhlelo zokusebenza esezivele ziyisebenzisela izinto zazo, kepha angikazami okwamanje.
I-Fenix ​​OS: ukubukeka kwe-MacOS neWindows Made eSpain